विज्ञान प्रविधि Archives - Naya Pusta
Home > विज्ञान प्रविधि
फेसबुकले गर्दै छ नयाँ परिवर्तन, अब देखिने छैन यस्ताे
Naya Pusta January 12, 2018 विज्ञान प्रविधि
समाचार, व्यापार, ब्राण्ड तथा मिडिया सम्बन्धी फिडको मामलामा फेसबुकले व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरवर्गले आफ्नो फेसबुक वालमा यसको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार फेसबुकमाथि परिवारका सदस्यबीच तथा साथीहरुबीचको संवादलाई बढावा दिने सामाग्रीलाई प्राथमिकता दिइने छ। फेसबुकको माध्मबाट आफ्नो पोस्ट धेरै भन्दा धेरै मानिसमा पुराउने समाचार, व्यापारिक विषयवस्तुको लोकप्रियतामा
समाचार, व्यापार, ब्राण्ड तथा मिडिया सम्बन्धी फिडको मामलामा फेसबुकले व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरवर्गले आफ्नो फेसबुक वालमा यसको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार फेसबुकमाथि परिवारका सदस्यबीच तथा साथीहरुबीचको संवादलाई बढावा दिने सामाग्रीलाई प्राथमिकता दिइने छ । फेसबुकको माध्मबाट आफ्नो पोस्ट धेरै भन्दा धेरै मानिसमा
ध्यानदिनुहोस् डिजिटल माध्यमले कतै तपाईको घरमा नकरात्मक असर त पारी रहेका छैन् ?
Naya Pusta January 7, 2018 विज्ञान प्रविधि
२१ औं सशाताब्दीर यो डिजिटलको युग हो । सामाजिक संजालहरुको बढ्दो पहुचसंगै मानिसहरुमा त्यसले थुप्रै असरहरु पनि पारी रहेका छन् । बिशेषगरी डिजिटल माध्यमबाट पोर्न अर्थात् अश्लिल कुराहरुको हेर्नु जमाद बढ्दो छ । तर, एक अनुसन्धानले नयाँ खुलासा गरेको छ । जहाँ अश्लील सामग्री हेर्नेहरुमा महिलाहरुको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ
Naya Pusta January 6, 2018 विज्ञान प्रविधि
एजेन्सी। सपनाको संसार निकै रहस्यमय हुन्छ । राम्रा र नराम्रा सपनाको विषयमा धेरै किसिमका मान्यताहरु पनि छन् । धेरैजसो हामीले देखेका सपनाहरु छिटै बिर्सिन्छौं । तर अब छिटै यस्तो प्रविधि आउँदैछ जसको प्रयोग गरेर हामीले त्यही सपना रेकर्ड गरेर भिडियो हेर्न सक्छौं । जापानी वैज्ञानिकहरुले यस्तो यन्त्र बनाएका छन् जसले
इन्टरनेटले जन्माएका गम्भीर मानसिक रोग, कतै तपाईं त पीडित हुनुहुन्न ?
Naya Pusta January 4, 2018 विज्ञान प्रविधि
पछिल्लो दशकमा इन्टरनेट टेक्नोलोजीमा भएको विकास एक किसिमले वरदान सावित हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ मानवीय जीवनमा यसको धेरै नराम्रो असर पनि परिरहेको छ । टेक्नोलोजीले मानवीय जीवनमा पुर्याउने नोक्सान यस्ता छन् कि जसलाई हल्का रुपमा लिनु मुर्खता हुने छ। अनुसन्धानकर्ताहरुले कैयौं नयाँ मानसिक रोग पत्ता लगाएका छन्, जो इन्टरनेज र
चीनले बनायो बिजुली निकाल्ने सोलार राजमार्ग !
Naya Pusta December 30, 2017 विज्ञान प्रविधि, विश्व
बेइजिङ । चीनले विश्वकै पहिलो सोलार राजमार्ग बनाएको छ । एक किलोमीटर लामो यो राजमार्गले बिजुली उत्पादन गर्नेछ । चिसो मौसममा पनि यो राजमार्गले यहाँ जम्ने हिउँलाई पनि पगालिदिनेछ । यसका अलावा आउने दिनमा यो राजमार्गले विद्युतीय सवारीसाधनको पनि चार्ज गर्नेछ । पुर्वी चीनको शेनडोन्ग प्रान्तको राजधानी जिनानमा बनेको यो राजमार्गको
Naya Pusta December 24, 2017 विज्ञान प्रविधि
काठमाडौं । नेपालीलाई दाल, भात र तरकारीसँग अलिकति अचार पनि चाहिन्छ नै । अचार स्वादिष्ट हुनाले खाना रुचाउन यसले मद्दत गर्छ । बट्टामा खाँदिएको अचार बजारमा सजिलै पाइन्छ । तर नियमित रूपमा अचार खाँदा यसले स्वास्थ्यमा हानि पु–याउँछ । स्वादिष्ट अचारका साइड इफेक्टहरू पनि हुन्छन् । जानौं अचारले गर्न सक्ने हानिका
टेलिकमले ल्यायो ‘विन्टर अफर’, न्युन मूल्यमा आकर्षक प्याक
Naya Pusta December 21, 2017 December 21, 2017 Special News, विज्ञान प्रविधि
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जाडो मौसमका लागि विभिन्न प्रकारको प्याकसहित ‘विन्टर अफर’ ल्याएको छ । यो अफर भोलि पुस ७ गतदेखि सुरु भएर माघ २१ गते सम्म कायम रहनेछ । कम्पनीले विभिन्न प्रकारका डाटा प्याक र बोनसको रुपमा डाटा स्ट्रिमिङ प्याक समेत उपलब्ध गराएको छ । डाटा स्ट्रिमिङ प्याक युट्युब र
Naya Pusta December 19, 2017 विज्ञान प्रविधि
विश्वका ठूला प्राविधिक कम्पनीहरुका लागि फेकन्यूज अर्थात् नक्कली समाचारहरु ठूलो समस्या बनिरहेका छन् । फेसबुकले पहिले नै आफ्नो वेबसाइटमा फेकन्यूज रोक्नका लागि विभिन्न गम्भीर कदमहरु उठाइसकेको छ र अब गुगलले पनि यस विषयमा सख्त रबैया अपनाएको छ। यद्यपि, सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन गुगलले यस सन्दर्भमा आधिकारिक रुपमा केही बताएको छैन । तथापि,
सौर्यमण्डल जस्तै ८ वटा ग्रहले घेरिएको तारा भेटियो
Naya Pusta December 15, 2017 विज्ञान प्रविधि
अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले सौर्यमण्डल जस्तै ८ वटा ग्रहले घेरिएको तारा पत्ता लगाएको छ। नासाका अनुसन्धानकर्ताले अन्तरिक्षमा पृथ्वीसहितका ८ ग्रहले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने जस्तै गरी ८ ग्रहले घेरिएको तारा पत्ता लगाएका हुन्। यो सौर्यमण्डल बाहिर भेटिएको अहिलेसम्मकै ठूलो प्लानेटरी सिस्टम (ग्रह प्रणाली) हो। केप्लर–९० नाम गरेको यो तारा सूर्य भन्दा केही